BETPAS423 RYAN BABEL'DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! - RESTBET501.COM GİRİŞ
စူပါလိဂ်၏စတုတ္ထပတ်တွင်ဂလက်စတာရေးသည်Kasımpaşa 1-0 ကိုရှုံးခဲ့သည်။ ဤရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဝေဖန်မှုအားလုံးသည်ရိုင်ယန်ဘဲလ်သို့ရောက်သွားသည်။
မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများ Ryan Babel “သင်အနိုင်ရတဲ့အခါကူညီတာကလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါသင်အမှန်တကယ်ဘယ်သူနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသူတွေပြောတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသိတဲ့တစ်ခုတည်းတစ်ခုကငါဒီကစားသမားအုပ်စုကိုယုံကြည်တယ်” တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ရိုင်ယန်ဘေဘယ်လ်စကားလုံး ကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုကိုအတူတကွအနိုင်ယူပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မိသားစုတစ်စုပါ။ ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဟာသိပ်မတော်တဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှအဲ့လိုမပြောတတ်ပါဘူး။ နောက်လာမယ့်ဂိမ်းအတွက် ၂ ပတ်လောက်အသင့်ရှိနေဖို့လိုသေးတယ်။ ပုံစံဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်။
RESTBET501 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! SUPERBAHİS630 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBABA100 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! SUPERTOTOBET0120 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBABA138 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! RESTBET501 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 KORONAVİRÜSE YAKALANAN RYAN BABEL’DEN İYİ HABER GELDİ
9 Comments on BETPAS423 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ!
FEYZA November 29, 2020 at 9:10 pm
İRFAN November 29, 2020 at 11:20 pm
ÖMER November 30, 2020 at 12:10 pm
OKTAY November 30, 2020 at 12:30 pm
FATİH MEHMET December 1, 2020 at 12:20 pm
ESEN December 4, 2020 at 4:00 am
NESLİHAN December 10, 2020 at 3:00 pm
EMRE December 10, 2020 at 8:20 pm
NURAN December 11, 2020 at 10:40 am